Author: Maushakar Dule
Axmed Yare Play Download 6 5. Marka wuxuu kamid yahay culimadii qarnigii 5naad nooleyd. Biyahii waa qasmeen wax kale ayaa ku darmaday, waxa ku dhex darmay na waa daahir laf ahaan tiisu. Qaybta 1aad Nooca koowaad waxa weeyaan: Daahir buu noqon nayaa maxaa laga wadaa? Axmed Yare Play Download 26 2. Author archive Author website.
Tin iyo laf iyo gees iyo ciddi Soo wada baqti ma aha? Weyso labaad ma galaan, qabeys labaad na ma galaan, laakiin lafa hooda daahir bey u yihiin sooma aha? Biyo is bedelay, is bedel koodana auu keenay, wax daahir ah oo ku qasmay oo dhex galay, wax yaalaha daahiraadka ah. Saxaaba diisa kor kiisa ha ahaado [salli gaas] dhamaan tooda. Iyo wixii laba dooda ka dhashay maxaa laga wadaa?
Axmed Yare Play Download 14 1. Marka biya yar waxay ku nijaas soobayaan bi mujaradin mullaaqaati najaasa. Adeer daliil keen bey ku leeyihiin. Iney daahir yihiin hadal kama joogo, ineysan waxba daahirinin baa muran ka jira.
Markii laga fiiriyo qeybintii hore ee todobada ahayd waa meeshay ka soo jeedaan iyo qaab kooda marka la fiiriyo waxay u qeyb samayaan todoba.
Waxaa la isticmaali jiray, waa la miizaami jiray miizaan baa la isticmaali jiray. Waa ninka kitaabka iskaleh waxaa inta badan lagu sheegaa marka loo turjumahayo kitaab kan ayuu caan ku yahay [saaxibul qaaya wa taqriib] ama [qaayatul iqtisaar], kitaab kan ayuu caan ku yahay, laakiin keligii shjjaac ehee kutub kale na waa leeyahay.
Macnaha wuxuu doon nayaa inuu ku yiraahdo, gaabinta aan kitaabka gaabin naayo iyo soo koobida aan soo koobayo meesha uga dambeysa ee koobid la gaadhsiin karo ama gaabin la gaadhsiin karo ayaan shkjaac nayaa waaye, saas weeye macnaha. Xataa weelku haba ka sameys naado, maxaa yeelay xadiiska nahyiga ah wuxuu ku soo arooray laba dooda, laba dooda ayuu marka qaas ku yahay ayay leeyihiin.
Kitaabu Nikaax Abu Shujac Sh. Marka dahaara labaad waa geli karaa, marka dahaara ayay ku qayidaan mustacmal waaye biyahaas. Marka sidaas daraadeed xagga daliilka waa ugu dhow yahay, madaahibta ugu dhow buu kamid yahay, imaamka mad-habka iskaleh na wuxuu jamciyay beynal fiqih wal xadiith … Muxadith na waa ahaa, Faqiih na waa ahaa Bal waxaa la yiraahdaa waa ninkii ugu horeeyay ee jamciyay beynal fiqih wal xadiith aad bey ugu amaan naan arrin taa iyada ah.
Haa liter meelahaas weeye ayay imaan nayaa, kaa liter marka wixii ka yar nijaaso hadday gaadho wey nijaaseyn neysaa waaye ama ha bedesho ama yeynaan bedelin, wixii ka badan ama la eg na? Biyaha noocaas aha marka xukun kooda muxuu yahay?
Biyo leysku taahirin karo toddobo biyo waaye, 7 nooc oo biyaha kamid ah ayaa leysku taahiriyaa ama lagu dahaara qaataa ama wax lagu daahiriyaa. Imaamka kitaabka iskaleh tarjama dheer lagama hayo, inta badan kutubta u turjumta een arkay tabaqaatul shaaficiya al-kubraa suki iyo al-Aclam li Zakali iyo hiddaayatul Caarifiin ee uu leeyahay Baabaaniqolya haas ayaa taraajim tiisa wax ka sheegay iyaguna aad uguma ay dheeraanin, faqiih Shaafici ah oo kitaab kan hadda aan dul joogno oon bilaabeyno caan ku ah intaas ayey kaga gaab sadeen.
Madaahib taa mid kamid ah inuu marka hore ku tafaquho oo barto, markuu mad-hab kaa barto kadib ayuu markaa wuxuu ugu gudbayaa marxalada xigta inuu madaahib tii kale barto, wey u fududaan neysaa marka, haddaad kan Shaaficiga taqaano waxaad leedahay Maaliki yada maxay isku qilaafsan yihiin waa fudutahay asaas kii baad haysaa markaa, Xanafi yada maxay isku qilaafsan yihiin, Xanaabilada maxay isku qilaafsan yihiin. Biyahu iney qullateyn ka yar yihiin, nijaasa na gaadho ama ha bedesho ama yeynaan bedelin wey nijaas soobayaan haddey nijaaso ku darmanto.
Wa Jazaakum Allaahu Khayran. Mad-habka Shaaficiga Maalikiga Xanafiga Xambaliga Madaahib taa mid kamid ah inuu marka hore ku tafaquho oo barto, markuu mad-hab kaa barto kadib ayuu markaa wuxuu ugu gudbayaa marxalada xigta inuu madaahib tii kale barto, wey u fududaan neysaa marka, haddaad kan Shaaficiga taqaano waxaad leedahay Maaliki yada maxay qbuu qilaafsan yihiin waa fudutahay asaas shukaac baad haysaa markaa, Xanafi yada maxay isku qilaafsan yihiin, Xanaabilada maxay isku qilaafsan yihiin.
Haa nijaasa ayaa dhex gashay, shey nijaasa ah ama isaga ha u ekaado sida kaadida oo kale ama hake duwan naado shey nijaasa ah baa biyahii dhex galay.
Salaadda ayaa u horeyso sooma aha? Qeybta saddexaad baa laba ka kooban: Kitaabu Xuduud Abu Shujac Sh. Sidaas daraadeed rodolka Baqdaad oo rodol markaad kafada saarto, biyaha u dhigma ee kafada kale ceshen kara ayaa waxaa la yiraahdaa qullataan. Anaga sgujaac mathalan markaan wax yaalaha likuwidka ah, wax yaalaha maayaca ah, ee dareeraha ah, markeynu doonneyno ineynu qiyaas tiisa ogaano maxaan isticmaalnaa?
Iyo adila doodii maskax diisa way ka yara weyn tahay, wuxuu u baahan yahay marka hore sida culimad tilmaamayaan inuu mad-hab mucayin ah ku tafaquho. Axmed Yare Play Download 22 5. Axmed Yare Play Download 28 4. Mar hadday nijaasadu gaadho biyaha yarka ah waa nijaas soobeen, xataa yeynaan is bedelin ba, biyaha badan na nijaasadu ma saameeyso ilaa ay bedesho.
Hal kaasi waxa weeye waa shjuaac lagu dahaara qaato, wax yaalaha wax daahiriya waxaa kamid ah oo lagu dahaara qaato magdin wax la yiraahdo oo hargaha ku saabsan tii buu galayaa. Wajibad waa ururiyaha qoraalada diiniga ah si ay dadka jeceli inay bartaan diintood ugu fududaato akhrinta iyo daabacaada qoraalada oo af-Somali iyo English ka kooban Inshaa Allaah hadan waxaan shuhaac guda jirtaa si aan ugu soo kordhin lahayn qoraalada Carabiga ah.
Fiqiga noocaas ah waxa uu ku fiican yahay ardayga xooggaa dhismay oo wax u kala baxsan yihiin, laakiin ardayga bilowga ah waa inuu marka hore ku tafaquho mad-hab madaahibta kamid ah. Axmed Yare Play Download 23 1. Waxaa kamid ah mathalan: Wey is bedeleen marka.
aabuu Axmed Yare Play Download 16 1. Biyo miizaan kooda u dhigmaan oo rodol oo rodolka Baqdaad ah, muxuu Baqdaadi u leeyahay? Axmad ibnul Xusseyn ibnu Axmad al-Asbahaani ama Asfahaani. Maxammad ibnul Xassan ash-Sheybaani ardaygii Abuu Xaniifa abuj Shuruuq diisa kamid ah, doodo dheer na waa dhex mareen. Maadada lagu saarayo lama sheegin, waxaad doonto adiga u isticmaal, ama milix isticmaal ama gob isticmaal ama xataa muxuu ahaay shimbiraha xaar kooda ayaa xataa loo isticmaalaa ama haddaad doonto u isticmaal muxuu ahaay aashito u isticmaal ama chimico u isticmaal sida hadda la yiraahdo.
Imaamu Shaafici Abuu Xaniifa waxba kama qaadanin, lamana kulmin, ma soo gaadhin, laakiin ardaydii Abuu Xaniifa buu wax ka qaatay. Arbaco 14 Dhul Qacdah, Waxaa qoray: Labada qula maxaa la yiraahdaa?
Next story EUTECH PH 300 PDF
Previous story EVENING PRAYER HUMPERDINCK PDF